ဇိမ်ခံပန်းထိုးရင့်ရောင်သားရေအမျိုးသမီးစီးပခုံးလွယ်အိတ် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိခြင်း WoopShop®
ဇိမ်ခံပန်းထိုး Rhinestone သားရေအမျိုးသမီးဝတ်ပခုံးအိတ်
$24.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $53.99
ဇိမ်ခံပန်းထိုး Rhinestone သားရေပခုံးလွယ်အိတ် - အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Size: * * 16 20 10
ချိန်ညှိနိုင်သောပခုံးကြိုး၊ ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ပေးခြင်း၊ မိသားစုကိုပေးခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများသို့လက်ဆောင်များပေးပို့ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်
ပစ္စည်း: Suede + Rhinestone
မှတ်ချက် - ရှုထောင့်အားလုံးအားလက်ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ 2-3 စင်တီမီတာသွေဖည်မှုရှိနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမော်နီတာများအကြားကွာခြားမှုကြောင့်ရုပ်ပုံသည်ပစ္စည်း၏အမှန်တကယ်အရောင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်မည်မဟုတ်ပါ။ 1 လက်မ = 2.54 CM; 1 CM = 0.39 လက်မ
сумкасупер။ Прислаточнотакая, какзаказывала။ Оченьбыстро, буквальнозанеделю подушечканебылапомещена။ Спасибопродавцу !!
စူပါ ...... Polecam
နီကယ် torebka delikatnie zamki troszkęciężkosię odpinaja ale to nic
Torebka စူပါ !!! Paczka doszła w 8 dni od zamówienie။ Dostalam w prezencie gumkę do włosów